Muslimsk andlig vård i sjukvården: Om sjukhuskoordinatörerna på somaliska
Ku soo dhowaada!
Dadka oo dhan waxa ay u baahan karaan mid ka mid ah xarumaha daryeelka caafimaadka sabab caafimaad daro ama dhaawac soo gaara, mararka qaar waxa uu u baahanayaa taageero dhanka niyadda ah sida in la waaniyo ama la sabarsiiyo Ilaahna la xusuusiyo naxariista iyo ajarka uu u diyaariyey qofkii ku sabra dhibka haysta, sida diintu qabto. Hadaba laga soo bilaabo 2006 waxaa jira dad ka shaqeeya xiriirka isbitaalada iyo ururada islaamka ee ka jira dalka Sweden oo muslimiin ah. Waxaana la yiraahdaa Xiriiriye ama "Koordinatör" shaqadooduna waa inay isku xiraar xarumaha daryeelka caafimaadka & ururada islaamka ee ka jira Sweden. Waxayna ka jiraan meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka sweden, sida: Stockholm, Skåne, Uppsala, Göteborg, Örebro, Jönköping, Östergötland. Skövde waxaa jooga Imaam u gaar ah oo xaruntiisu tahay cisbitaalka.
Warbixin dheeraad ah waxaad ka heli:
Contact: Abdulkadir Haji Mohamud (cqaadir76@hotmail.com / Tel: 076-4328017)